ပုဂ္ဂိုလ်ရေးအချက်အလက်များ၏ကိုင်တွယ် | အွန်လိုင်းအင်္ဂလိပ်စာဇာတိစခန်း
native စခန်းနှင့် native စခန်း Pte Ltd. , Co. , Ltd (လျှော့, အတူတကွ "ကုမ္ပဏီ") ကျွန်တော်တို့ရဲ့ဖောက်သည်ကျေနပ်အောင်ရမညျဖွစျပှားသင်ခန်းစာများနှင့်ဝန်ဆောင်မှုများကိုထောက်ပံ့ပေး, ငါတို့မစ်ရှင်လိမ့်မည်ယုံကြည်မှုကိုရဖို့ရန်ဖြစ်ပါသည်။ "ကိုယ်ရေးကိုယ်တာသတင်းအချက်အလက်များကာကွယ်စောင့်ရှောက်ရေးပေါ်လစီ" အရာရှိများနှင့်ဝန်ထမ်းများကို: အထူးသဖြင့်လိုက်နာဆောင်ရွက်ခြင်းများအပြင်ခုနှစ်တွင်ပုဂ္ဂိုလ်ရေးအချက်အလက်များ၏ကာကွယ်စောင့်ရှောက်ရေး, "ကိုယ်ရေးကိုယ်တာသတင်းအချက်အလက်များကာကွယ်စောင့်ရှောက်လိုက်နာအစီအစဉ်လိုအပ်ချက်များကိုနှင့်ပုဂ္ဂိုလ်ရေးသတင်းအချက်အလက်, အပြုအမူများကာကွယ်စောင့်ရှောက်ရေးနှင့်ပတ်သက်သောဥပဒေများနှင့်စည်းမျဉ်းများ" နှင့် ပတ်သက်. , အောက်ပါအတိုင်းပြဋ္ဌာန်းအတူ ဤမူဝါဒနှင့်အညီ, ကြှနျုပျတို့ကိုစဉ်ဆက်မပြတ်အနာဂတျတှငျပုဂ္ဂိုလ်ရေးအချက်အလက်များ၏ကာကွယ်စောင့်ရှောက်ရေး၏စီမံခန့်ခွဲမှုစနစ်အတိုးတက်လာဖို့ကြိုးစားကြသည်။
အဆိုပါ "ကိုယ်ရေးကိုယ်တာသတင်းအချက်အလက်များ" စသည်တို့ကိုမွေးဖွားသို့မဟုတ်အခြားဖော်ပြချက်၏နေ့စွဲဖြင့်တိကျတဲ့တစ်ဦးချင်းစီကိုခွဲခြားသတ်မှတ်နိုင်သည့်သတင်းအချက်အလက်များတွင်ထည့်သွင်းထားတဲ့, ဆက်လက်ရှင်သန်နိုင်ဖို့တစ်ဦးချင်းအမည်, အကြောင်းသတင်းအချက်အလက်ဖြစ်ပြီး, အလွယ်တကူအခြားသတင်းအချက်အလက်များနှင့်အတူ collated ဒါကြောင့်အားဖြင့်တိကျတဲ့တစ်ဦးချင်းစီကိုခွဲခြားသတ်မှတ်နိုင်လိမ့်မည်ဟုသောအရာတို့ကိုရည်ညွှန်းဖို့ဖြစ်နိုင်ပါတယ်။
န်ဆောင်မှုများဝယ်ယူအတွက်ကျနော်တို့ကစုံစမ်းရေးကော်မရှင်အခါသင်၏ပုဂ္ဂိုလ်ရေးသတင်းအချက်အလက်များကိုစုဆောင်းရန်အရာလည်းမရှိ။ အသုံးပြုမှုဖော်ပြထားသောရည်ရွယ်ချက်၏ထိပ်မှငွေကောက်ခံအမိန့်သည်ဥပဒေနှင့်တရားမျှတသောနည်းလမ်းပေါ်တွင်မူတည်သည်။ ကျွန်တော်တို့ရဲ့ကုမ္ပဏီအတွက်စုဆောင်းခံရဖို့ပုဂ္ဂိုလ်ရေးဆိုင်ရာအချက်အလက်များကိုအောက်ပါအတိုင်းကဲ့သို့ဖြစ်ကြ၏။
သင်၏ငွေသွင်းငွေထုတ်သမိုင်းနှင့်ကုမ္ပဏီရဲ့ contents (学習履歴を含みます)
သင်ယူမှုအကျိုးသက်ရောက်မှုတိုးမြှင့်ဖို့အမိန့်များ analysis, အစီအမံများအကောင်အထည်ဖော်ခြင်း
ဥပဒေများနှင့်စည်းမျဉ်းအပေါ်အခြေခံပြီး အကယ်. များနှင့်အဖွဲ့အစည်းများ၏နိုင်ငံသို့မဟုတ်ဒေသဆိုင်ရာအစိုးရဒါမှမဟုတ်ပစ္စည်းအဟောင်းလက်ခံဥပဒေများနှင့်စည်းမျဉ်းများပါပြဋ္ဌာန်းချက်များမှရုံးထွက်သယ်ဆောင်ရန်ကပူးပေါင်းဆောင်ရွက်ရန်လိုအပ်သည်ဘယ်သူကိုမှပုဂ္ဂိုလ်တစ်ဦးလျှင်
ဖောက်သည်များကကျွန်တော်တို့ကိုအပျနှငျးပုဂ္ဂိုလ်ရေးအချက်အလက်များ၏အန္တရာယ်ကင်းရှင်းရေးစီမံခန့်ခွဲမှုကျွန်တော်တို့ရဲ့ကုမ္ပဏီအတွက်သက်ဆိုင်ရာဥပဒေများနှင့်စည်းမျဉ်းအညီသင့်လျော်သောကိုင်တွယ်ဖျော်ဖြေအသုံးပြုပုံ service provider ကကုမ္ပဏီအားဖြင့်ကျိုးကြောင်းဆီလျော်စည်းရုံးရေး, ရုပ်ပိုင်းဆိုင်ရာ, လူ့သင့်လျော်သောနည်းပညာပိုင်းဆိုင်ရာအစီအမံတာအပြင်, ပုဂ္ဂိုလ်ရေးဒေတာဖြစ်ပါတယ် ခွင့်ပြုချက်မရှိဘဲပုဂ္ဂိုလ်ရေးအချက်အလက်များ၏ဆုံးရှုံးခြင်းမှကျူးကျော်, မမှန်မကန်ပြုလုပ်မှုနှင့်ယိုစိမ့်၏အန္တရာယ်နှင့်တူသောကာကွယ်တားဆီးဖို့ကြိုးစားကြသည်။
cookie ကိုအသုံးပြုခြင်း (cookies များကို)
အဆိုပါကုမ္ပဏီကျွန်တော်တို့ရဲ့ဖောက်သည်ပိုကောင်းဝန်ဆောင်မှုပေးသျောလညျးသငျတို့ကပုဂ္ဂိုလ်ရေးအရသတ်မှတ်သတင်းအချက်အလက်စုဆောင်းခြင်းဖျော်ဖြေဖို့မရည်ရွယ်သော cookie ကို (cookies များကို), သုံးစွဲဖို့လိုပေမည်နိုင်ရန်အတွက်, သင့်ရဲ့ privacy ရန်မလိုမုန်းထားရှိပါတယ်။ သင် cookie ကို (cookies များကို) လကျခံဖို့ဆန္ဒရှိကြဘူးလျှင်လည်း, သင်သည်သင်၏ browser setting ကိုပြောင်းလဲနိုင်ပါတယ်။
※အဆိုပါ cookie ကို (cookies များကို), သင့်ရဲ့ browser မှာရှိတဲ့ဆာဗာကွန်ပျူတာကနေလှေတျတျောမူသညျ, ဖောက်သည်သင်အသုံးပြုနေသောကွန်ပျူတာ၏ hard disk ကိုထဲမှာသိမ်းထားတဲ့ကြောင်းအချက်အလက်များဖြစ်ပါတယ်။
သငျသညျသွားရောက်ကြည့်ရှုကျွန်တော်တို့ရဲ့ site ၏ဖောက်သည်များက Google ကျွန်တော်တို့ရဲ့ကြော်ငြာအပါအဝင်တတိယပါတီများ၏, ထိုကုန်စည် browsing အတွက်များ၏သမိုင်းအရသိရသည်, Google ကပေး remarketing ကြော်ငြာတွေ cookie ကို (cookies များကို) ကိုင်ပြီးအားဖြင့် remarketing ကြော်ငြာတွေ, သင်ကြော်ငြာအလတ်စားအပေါ် posted ကြောင်းပြောကြသည်။ ဤကိစ္စတွင်အတွက်သတင်းအချက်အလက်ရရှိထားသူကွတ်ကီးထဲမှာသင့်ရဲ့ကိုယ်ရေးကိုယ်တာအချက်အလက်များပါဝင်သည်ကြောင်းမရှိပါ။ သင်သည်သင်၏ကိုယ်ပိုင်အပြင်အဆင်များဖြင့်ဤ function ကို disable လုပ်ဖို့လိုပေမည်။
ကြော်ငြာတွေ Remarketing ကျနော်တို့ Re-စျေးကွက်ရှာဖွေရေးမူဝါဒနှင့် Google မှ AdWords အများ၏အထိခိုက်မခံအမျိုးအစားတွင်ထည့်သွင်းခံရဖို့အချက်အလက်များ၏ကန့်သတ်နှင့်အတူလိုက်လျောဖို့ရှိသည်။ ထို့အပြင်ကပိုပြီးသင့်ကိုယ်ပိုင် browser setting ကို၏၏ function ကို disable လုပ်ဖို့ဖြစ်နိုင်ပါတယ်။ သင်စိတ်ကြိုက်ကြော်ငြာမန်နေဂျာအပေါ်ဒါမှမဟုတ် Google Analytics ဘေးဖယ်ထုတ်အတွက် add-on သင်ဤ function ကို disable လုပ်ဖို့လိုလျှင်ရန်ကလစ်နှိပ်ပါရှိမရှိသွားရောက်ကြည့်ရှုပါ။
အဆိုပါကုမ္ပဏီ, ပုံရိပ်သတင်းအချက်အလက်ဝယ်ယူရွေ့လျား၏ရည်ရွယ်ချက်, ကျနော်တို့ YouTube ကို API ကို service ကိုအသုံးပြုနေကြပါတယ်။ YouTube ကို API ကိုဝန်ဆောင်မှု Google ရဲ့ privacy ကိုမူဝါဒ, YouTube ၏ဝန်ဆောင်မှုစည်းကမ်းချက်များကိုအပေါ်အခြေခံပြီးထောက်ပံ့ပေးသည်။
YouTube ၏ဝန်ဆောင်မှုစည်းကမ်းချက်များကို Google က privacy ကိုမူဝါဒအများအတွက်အောက်ပါဖတ်ရှုပါ။
YouTube ကို - Service ၏စည်းမျဉ်းများ
ပုဂ္ဂိုလ်ရေးအချက်အလက်များ၏ input ကို၏ထိုအချိန်က, လုံခြုံရေးအကြောင်းပြချက်များအတွက်ဤသတင်းအချက်အလက်ကြားဖြတ်ဖြစ်ပါတယ်ကျနော်တို့ဝင်ရောက်စွက်ဖက်ဖြစ်ကာကွယ်ပေးနိုင်သို့မဟုတ်လက်ကမြင်း၏ရည်ရွယ်ချက် SSL (Secure Sockets Layer) နည်းပညာကိုအသုံးပြုပါ။
※SSL ကို, သတင်းအချက်အလက် encrypt လုပ်ဖို့ဖြစ်ပါတယ်တမ်-အထောက်အထားမှ anti-wiretapping နှင့်အချက်အလက်များ၏ဂီယာနဲ့ဧည့်ခံနိုင်စွမ်းဖြစ်ပါတယ်။ ဒါဟာ SSL ကိုအသုံးချဖို့အားဖြင့်လုံလုံခြုံခြုံနောက်ထပ်သတင်းအချက်အလက်များပေးပို့နိုင်ပါလိမ့်မည်။
ထောက်ပံ့မြစင်တာကဲ့သို့ဇာတိစခန်းအဖွဲ့ဝင်တစ်ဦးကိုဆက်သွယ်ပါ။ (24 နာရီကြာတဲ့နေ့က)
ထောက်ပံ့မြစင်တာနဲ့တူ native စခန်းအဖွဲ့ဝင်
အဆိုပါကုမ္ပဏီ, စုဆောင်းခံရဖို့ပုဂ္ဂိုလ်ရေးအချက်အလက်များ၏ပြောင်းလဲမှုကိုသင်ရည်ရွယ်ချက်အတွက်အသုံးပြုရန်ပြောင်းလဲမှုသို့မဟုတ်အခြားသီးသန့်တည်ရှိမှုမူဝါဒအပြောင်းအလဲလုပ်သည့်အခါဖြစ်ပါသည်, ဤစာမကျြနှာအပြောင်းအလဲနှင့်အတူပုံနှိပ်ထုတ်ဝေပါလိမ့်မည်။